त्यसपछि प्रेमीसँग मिलेर आमाले भान्सामा लगेर गरेको यो सबै कुरा ६ बर्षीया छोरीले देखेपछी – Classic Khabar
त्यसपछि प्रेमीसँग मिलेर आमाले भान्सामा लगेर गरेको यो सबै कुरा ६ बर्षीया छोरीले देखेपछी
June 5, 2021 216
प्रेमीसँग मिलेर भारतमा २ सन्तानकी आमाले आफ्नै श्रीमानको वि भ त्स तरिकाले ह त्या ग रे को घटना सार्वजनिक भएको छ । भारतको मुम्बाइमा २७ वर्षीया शाहिदाले आफ्नो प्रेमीसँगै मिलेर श्रीमानको ह त्या ग रि श वलाई चा र टु क्रा पा रे र भा न्सा मा गा डि एको खु लेको हो ।
भारतीय सञ्चारमाध्यममा उल्लेख भएअनुसार शाहिदाका श्रीमान रईस शेख एक कपडाको पसलमा काम गर्थे । उनीहरुको ६ वर्षकी छोरी र साढे २ वर्षको छोरा थिए । शाहिदाका श्रीमान रईसले शाहिदालाई उनको प्रमीसँग आ प त्तती ज न क अ वस्थामा देखेपछि उनीहरुबीच झ ग डा भएको थियो । शाहिदाले च क्कु ले श्रीमानको ह त्या ग रे की थि इन् ।
त्यसपछि प्रेमीसँग मिलेर शाहिदाले शवलाई भान्सामा गा डे की थि इन् । यो सबै भएको छोरीले देखिन र शाहिदाले कसैलाई यो कुरा नभन्न ध म्की दिएकी थिइन् । यदि भनिस भने तिमीहरुको पनि यस्तै हालत गर्छु भने पछि उनीहरु चुपचाप बसेका थिए ।
निकै दिनसम्म पनि रईसको पत्ता नलागे पछि छिमेकीले प्रहरीलाई उनी हराइरहेको जानकारी गराए । तीन दिन पहिले रईसका भाइ गाँउबाट मुम्बइ आए र ६ बर्षीया बच्चाले सबै कुरा उनलाई बताएपछि उनी प्रहरी कहाँ पुगेका थिए । त्यसपछि घटनाको बास्तविकता बहिर आएको थियो ।
Nextजब धुमधामका साथ सात फेरा लिएर घर भित्र्याएकि श्रीमतीले जे गरिन त्यसले बेहुलाको होस् उड्यो !
मोडल रितु तामाङले गरिन् आफ्नो बिहेबारे रहस्यमय खुलासा को संग गर्दैछिन बिहे, दुर्गेस कि राजु ? (हेर्नुस भीडीयो)
झन कडा बनिन् रामकुमारी झाँक्री , ओलीसँग कुनै हालतमा झुक्दैनौँ, तह लगाएरै छाड्छौँ, सांसद पद गए जाओस्
के दोस्रो बच्चाको तयारीमा छन धुर्मुस सुन्तली यो लकडाउनमा ? (भिडियो हेर्नुस)